Mgbe m na-pịa bọtịnụ nbudata ọ dịghị ihe na-eme, gịnị ka ị ga-eme?
Ajụjụ banyere simulators, add-ons na weebụsaịtị
Ị chere ma ọ dịghị ihe mere, ọ dịghị faịlụ a na-ebudatara, ikekwe mgbe nkeji ole na ole na-eche ka ị nata ozi ezighị ezi nke ụdị "Oge Njikọ" ma ọ bụ "ERR_EMPTY_RESPONSE" ma ọ bụ ozi ndị ọzọ dịka ihe nchọgharị Ịntanetị gị.
N'ezie, a na-eziga nbudata sitere n'aka Rikoooo site na ihe nkesa ndị ọzọ na ọdụ ụgbọ mmiri 8888 (ex http://download.rikoooo.com:8888) nke a maka nchekwa dị mma nke downloads dị iche iche na faịlụ nke ọtụtụ Gigabytes.
Nsogbu bụ na firewall nke onye ntanetị (site na Livebox, Freebox, Neufbox) nke ndị ọrụ ụfọdụ ka ahazi iji jụ 8888 ọdụ ụgbọ mmiri (yana ọdụ ụgbọ mmiri 8080), mara ma ị nọ na nke a, gaa na Simviation.com ma budata faịlụ ọ bụla na-enweghị ihe ọghọm, ọ bụrụ na nbudata ahụ amaliteghị (dị ka Rikoooo), mgbe ahụ, i so n'ime ndị pasent ole na ole nke ndị ọrụ ha na-ebu nje 8888 (na 8080 maka Simviation). A na - ejikarị ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ eme ihe maka ntanetị weebụ, iyi egwu, na HTTP, ya mere, ọ dị mma imeghe.
Ị ga - ejikọta na rawụta gị (site na Livebox) ma gbakwunye iwu nke mepee 8888 TCP / UDP port.
Nke a bụ njikọ ụfọdụ isiokwu na Bekee nke na-akọwa otú ị ga-esi mepee ọdụ ụgbọ mmiri gị, egbula oge ime nyocha gị na Google na-eji aha onye na-ahụ maka ọrụ Ịntanetị dịka isiokwu.
Site na WikiHow
Site na HowToGeek
Jikọọ vidiyo Youtube na ọtụtụ nkuzi (gbakwunye onye na-ahụ maka ịntanetị dịka isiokwu)
na Saturday March 03 by rikoooo